Ngwa egwuregwu egwuregwu ụmụaka kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Oge dijitalụ dị ebe a iji nọrọ ma jiri ya rụọ ọrụ. Obere ekele maka ịdị mfe ya nwere ike ịmalite, ma ọ bụ na nwata ma ọ bụ karịa. Otu kachasị mma maka afọ abụọ na elu bụ egwuregwu mgbagwoju anya.
Na gam akporo enwere otutu ihe omuma umuaka umuaka n'ime Storelọ Ahịa Play, ụlọ ahịa nke nwere nchekwa data nke ọtụtụ nde ngwa. Anyị na-egosi gị ihe kacha mma ugbu a na nke kachasị mma nke obodo taa.
1 Pumụaka mgbagwoju anya
2 Dino egwuregwu mgbagwoju anya
3 Egwuregwu Jigsaw HD
4 Egwuregwu egwuregwu egwuregwu maka ụmụ agbọghọ
5 Zzlemụaka mgbagwoju anya
6 384 egwuregwu mgbagwoju anya
7 Ihe mgbagwoju anya umuaka maka umuaka
8 Egwuregwu ụmụaka na egwuregwu mgbagwoju anya
9 Ihe egwuregwu egwuregwu egwuregwu maka ụmụaka n'efu
10 Ihe egwuregwu ụmụaka
11 Zzlegbọ ala mgbagwoju anya maka ụmụaka
12 Mgbaghoju anya nke izu ike
13 Pumụaka na-amụ ije zzmụaka maka ụmụaka
14 Ihe omimi anumanu
Pumụaka mgbagwoju anya
Ọ bụ ezigbo aha maka ụmụaka gbara ụlọ akwụkwọ ọta akara, ebe ọ na-eme ka uche onye ọ bụla n'ime ha nwee egwuregwu dị mfe na agụmakwụkwọ. Na Puzzles maka ụmụ ọhụrụ, ụmụaka ga-amụta ịkọwa ọdịiche, chọpụtakwa ihe dịka anụmanụ, mkpụrụ osisi, njem, agba na ndị ọzọ.
Ihe mgbagwoju anya maka ụmụ ọhụrụ bụ nnukwu ihe ọmụmụ ihe ọmụmụ, ọ na - enyere aka ịzụlite nka na ndị pere mpe, mmekọrịta, mmekọrịta na nkà. Ntụrụndụ bụ ihe ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ngwa iji tụlee na ọ bụ ka ị wee zụọ ụfọdụ awa nke ụbọchị.
Developer: Ngwa ajụjụ
Dino egwuregwu mgbagwoju anya
Egwuregwu na-aga ụkwụ na ụkwụ na mmụta, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ otú Dino Puzzles si abịaru ya nso, egwuregwu na-atọ ụtọ na agụmakwụkwọ maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Ngwa a bụ mgbaghoju anya n’isiokwu gbadoro dinosaurs, ị ga-edekọta rue mgbe ị tinyere taịlị ikpeazụ.
Dinosaur nke ọ bụla nwere ngụkọta nke isii ma ọ bụ asaa iberibe iji mechaa ya, ozugbo ọ gwụchara, enwere ike ịmatakwu ya ma hụ ya na-aga. Dino Puzzles dị ezigbo mma, ị ga-enwe ike ịmụ aha nke dinosaurs ọ bụla na-apụta na egwuregwu mgbagwoju anya.
Ihe mgbagwoju anya ụmụaka Dinosaur
Egwuregwu Jigsaw HD
Ọ bụ ngwa nwere ọtụtụ onyonyo iji mee mgbagwoju anya, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ihe ọzọ na ndị ọzọ dịka ọ fọrọ nke nta enweghị njedebe. Enwere foto 6.000, na mgbakwunye nchekwa data na-agbasawanye oge na ọbụlagodi na-anabata foto site na obodo.
Ndị nne na nna, ya na ụmụaka, nwere nhọrọ ịhọrọ ihe onyonyo na ọnụọgụ nke ha chọrọ iji rụọ ọrụ n’oge ahụ niile, tupu ha ebido. Jigsaw Puzzles HD na-agbakwụnye ihe dị ka egwuregwu 20 dị iche iche kwa izu, ma e wezụga nke ọ bụla n'ime ha na-enye nsogbu maka nsogbu ụmụaka.
Nchịkọta Jigsaw mgbagwoju anya HD
Egwuregwu egwuregwu egwuregwu maka ụmụ agbọghọ
Aha ahụ na-eduhie eduhie ka ọ nwere ike ịkpọ ma ụmụ nwoke ma ụmụ agbọghọ. Ọ bụ ngwa ụmụaka nke a ga-eji dozie nsogbu mgbagwoju anya nke ihe dịka 9 iberibe. Ebumnuche ya maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị site na afọ 2-3 n'ihu, ịdị mfe igwu egwu.
N'ime anụmanụ ndị ahụ bụ unicorns, nkịta, nwamba na ọtụtụ ndị ọzọ, ma e wezụga imelite n'ime izu iji dozie ndị ọhụrụ. Ọ na - amalite ncheta, nlebara anya, ikike moto na iche echiche, ewezuga izu oke iji soro ndị nne na nna nọrọ ọtụtụ oge.
Zzlemụaka mgbagwoju anya
Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị emezue, ebe ọ bụ na o nwere site na mgbaghoju anya dị iche iche ruo na nke ụfọdụ dị mgbagwoju anya iji zụlite uche nke ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Nhọrọ ịhọrọ n'etiti ole na ole na ibe ga-adabere na oge ịchọrọ ịrara ya.
Ọ nwere interface dị mma ma dị egwu, ọ zuru oke maka obere aka, ọ dị mma maka ụmụaka na ụmụaka na-etolite etolite, malite na 2 ruo 6 afọ. Ọ gụnyere egwuregwu anọ: egwuregwu mgbagwoju anya, eserese, ụdị na egwuregwu ihe omimi, ha niile nwere nnukwu onyonyo dịgasị iche iche nke ụmụ ntakịrị ga-emecha.
Mụaka mgbagwoju anya - Ihe mgbagwoju anya na ụdị anụmanụ
384 egwuregwu mgbagwoju anya
Ọ bụ ngwa ụmụaka nwere ọtụtụ mgbagwoju anya, nke mere na ha fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha, dabara adaba maka ụmụaka na ụlọ na ndị agadi. Nchịkọta egwuregwu mgbagwoju anya na-eweta edemede dịka anụmanụ, nri, ime ụlọ ịwụ, kichin, arịa ụlọ, ụgbọ ala na ngwa ọrụ, yana ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ enwere ike ịhọrọ ozugbo ị mepere ya.
Ọ bụ otu n'ime ngwa maka ụmụaka mgbaghoju anya na nke kacha mma votes, 384 Puzzles maka ụmụaka jisiri ike merie 4,1 kpakpando nke 5. The abụ olu ụtọ bụ adụ, na-emegharị ọ bụla nke ngalaba na dị ka ma ọ bụrụ na ndị na-ezughị, ị nwere ike ibudata ihe mgbagwoju anya na usoro dị iche iche nke mmelite.
Ihe mgbagwoju anya maka ụmụ nwoke, ụmụ agbọghọ
Ihe mgbagwoju anya umuaka maka umuaka
Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị dị n'ụwa niile, enwere ya n'ihe karịrị asụsụ 30 dị iche iche, yana ihe karịrị 100 ihe okike dị iche iche iji mepụta. The silhouettes na-abụkarị nke ụmụ anụmanụ, na mgbakwunye na-eduzi ụmụntakịrị ịhọrọ n'etiti dị iche iche taịl nile na-eme ka a na-ewu ewu ngwa maka gam akporo.
Na mgbakwunye na mgbagwoju anya, Animal Puzzles for Children nwere ebe nchekwa egwuregwu na agba ihe na a idaha nke ga-agwụ agwụ na a ụfọdụ oge. Egwu ahụ zuru oke mgbe ọ bịara ibi ndụ gbagwojuru anya, na-eme mgbanwe maka egwuregwu ọ bụla n'ime ngwa ahụ.
Ihe mgbagwoju anya anụmanụ maka ụmụaka
Egwuregwu ụmụaka na egwuregwu mgbagwoju anya
Egwuregwu na egwuregwu mgbagwoju anya maka ụmụ ọhụrụ bụ ngwa yiri nke ụfọdụ ndị gara aga, yana isiokwu dịka mkpụrụ osisi dabara adaba, ọrụ aka ma ọ bụ anụmanụ. Ọ zuru oke maka ụmụntakịrị, na-agagharị otu mpempe iji mezue usoro ọ bụla nke mebere egwuregwu egwuregwu a.
Ngwa a na - enyere ụmụaka aka ịzụlite mkpakọrịta, imetụ ihe na akụrụngwa, na - eji ụmụ anụmanụ, njem, ọrụ na mkpụrụ osisi na-amụ ihe. Dị ka nke gara aga, ọ bụ idobe iberibe iji mezue nke ọ bụla n'ime ọtụtụ ndị dịnụ, nke karịrị 100 mgbagwoju anya.
Ihe egwuregwu egwuregwu egwuregwu maka ụmụaka n'efu
Ọ bụ otu n'ime mgbagwoju anya zuru oke dịnụ, nwere ọtụtụ iberibe dị iche iche, sitere na 6 ruo 9, 12, 16, 30, 56 na ọbụlagodi 72, nke ikpeazụ bụ nke kachasị sie ike. Nnukwu isiokwu dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ ngwa iri kachasị na Play Store, yana egwuregwu Ekeresimesi, Animals, Witches, Pirates na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mbido ị ga-ahọrọ onyonyo, họrọ iberibe ịchọrọ igwu ma mee ya, nke a ga-agbanwe oge iji mechaa ya ma ọ bụrụ na ịhọrọ otu n'ime 6 ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ, a na - ejikwa onyogho ọhụụ emelitere ya ugboro ugboro iji mee puzzles ọhụrụ.
Mgbagwoju anya anụmanụ maka ụmụaka
Developer: App Umuaka umuaka - Egwuregwu umu nwoke na umu agbogho
Ihe mgbagwoju anya na-eme ka uche umuaka puta ihe kariri iri ano di, gbakwunye kwa onwa ha na-agunye ihe omimi ise di na ise. 'Smụaka mgbaghoju anya bụ ngwa a ma ama sitere na Storelọ Ahịa Play, yana akara nke 90 sitere na isi ise enwere ike ma nwee ọtụtụ ndị nkuzi kwadoro.
Ihe omimi ọ bụla na-esi na 4 gaa na 25, nhọrọ nke ọ bụla dabere na oge ịchọrọ ịrara ya nye, ma e wezụga nke ọ bụla n'ime ha nwere oke iji wuchaa ya. Mgbaghoju anya maka ụmụaka bụ ihe eji akwụ ụgwọ n'efu ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ, yana ọfụma na anya na-adọta maka ụmụaka.
Zzlegbọ ala mgbagwoju anya maka ụmụaka
Mụ ntakịrị dị ka ụgbọ ala, nke a bụ otu n'ime mgbagwoju anya kachasị mma maka ụmụaka. Ekepụtara Puzzle Cars maka ụmụaka iji meziwanye nlebara anya, yana dọpụ uche ha ma soro ha gwuo egwu ogologo oge ịchọrọ site n'inwe ihe mgbagwoju anya dị iche iche 100.
Okwesiri ka umuaka nwere autism, umuaka site na 2 rue 5 na umuaka na mmepe, ha kwesiri umuaka nke ntolite ma oburu na ha choro iga ebe nchekwa. Ihe edeturu na ngwa a bu ihe 4,1 n’ime ihe ise ma obu nani ihe kachasi nma na Storelọ Ahịa .lọ Ahịa.
Mgbaghoju anya nke izu ike
Ihe mgbagwoju anya dị na ngwa a kwesịrị ekwesị maka ụmụaka na ndị okenye, na-emegharị n'ụzọ dị mkpa maka mmadụ niile, na-aga site na nke kachasị mfe na ụfọdụ mgbagwoju anya. N’etiti ihe ha dị mkpa bụ mgbaghoju anya ha na-agbakwunye kwa ụbọchị, na mgbakwunye na ịga site na 24 ruo iri asaa na abụọ, ka iberibe iberibe ahụ na-esikwu ike.
Ọ nwere ọnọdụ pụrụ iche maka ndị egwuregwu aka ekpe, nhọrọ iji hụ onyogho zuru ezu iji nyere gị aka ịkọwapụta ihe mgbagwoju anya, na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ezubere ya maka ụmụaka 6 afọ na okenye, na mgbakwunye inwe ihe karịrị 100 egwuregwu mgbagwoju anya na ndị niile agbakwunyere kwa ụbọchị.
Pumụaka na-amụ ije zzmụaka maka ụmụaka
A na-eme ihe mgbagwoju anya maka ụmụaka nke 2, 3 na 4 afọ, na iberibe sitere na otu ibe ruo asatọ, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịhọrọ ndị gbagwojuru anya maka afọ ndị ọzọ. Ihe karịrị 100 dị iche iche na 9 dị iche iche edemede, ngwa enweghị ihe mgbasa ozi.
Ndi edemede di iche iche iji mee ka o buru ihe di nkpa ma o bia n'inye ihe omimi di iche iche kwa ubochi maka umuaka. Dinosaurs, chinchi, ihe eji egwuri egwu, ifuru na osisi, ụwa na oke osimiri, umu anumanu, umu anumanu, nri na otutu ndi ozo di na Toddler Puzzles for Kids, nke nwere akara nke ihe 4,6.
Egwuregwu ụmụaka: mụta, nwata afọ 2+
Ihe omimi anumanu
Ihe mgbagwoju anya kachasị mfe maka ụmụaka nke ụmụaka, nke kachasị mma maka ịmalite ịmalite nlebara anya na afọ 2, bụ nke onye okike nke ngwa ahụ kwadoro. Ihe mgbagwoju anya sitere na otu mpempe na ọtụtụ, ihe kachasị mma bụ na ndị nne na nna na-eso nwata ahụ ka ọ mụta ihe.
Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị na-emewanyewanye ka oge na-aga, a gbanwere interface dịka ọmụmaatụ kpamkpam, na mgbakwunye na ịme ihe dị mkpa mgbe ọ na-abịa ọsọ ọsọ na ibe. Ọ bụ egwuregwu dị mfe yana egwuregwu, na mgbakwunye na ịmụ aha nke ihe dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa egwuregwu egwuregwu ụmụaka kacha mma maka gam akporo